Ama-bacterium overgrowth kwenzeka ngenxa yezizathu ezihlukahlukene, ezivame kakhulu - Ukudla okungalungile, ikhwalithi embi imikhiqizo esetshenziswa, isimo okungekuhle emvelweni endaweni yokuhlala, nokusebenzisa imithi ngokweqile zifana, okuyinto ukubhubhisa nezilwanyana ezincane ezuzisayo, njll Imiphumela kwephulwe microflora - .. Uhudo, ukubuyisa, ukuqunjelwa, ukuqubuka iguliswa futhi nezinye izinkinga zesikhumba. Ukuze ekwelapheni dysbacteriosis ezidingekayo zokunciphisa amathumbu nezidakamizwa okuqondene iqembu probiotics futhi equkethe nezilwanyana ezincane ezuzisayo. indlela yabo kakhulu ukusheshisa yokutakula futhi izimpawu ezingezinhle. Ngokuvamile ukuncoma ongasichitha ku izidakamizwa "Bifiform" noma "Linex". Yini kungcono ukusebenzisa? Izenzo izidakamizwa zifana, kodwa kulesi senzakalo, futhi odokotela kanye neziguli banombono.
Umuthi 'Bifiform "noma" Linex "- ukuthi kungcono ukunikeza izingane?
Futhi kanye nezinye izidakamizwa kungenzeka zaphathwa ingane. Kodwa uma capsule "Linex" akhiqizwa ngendlela efanayo ukuthi isetshenziswa ukwelapha abantu abadala nezingane (kuhlanganise nezinsana zabo), lesi sidakamizwa "Bifiform" izingane enze uchungechunge ahlukene abhalwe "Baby."
Umuthi 'Bifiform "noma" Linex "- okuyinto engcono? Umbono zabantu abavamile
Abaphikisi nabasekeli izidakamizwa ngamunye cishe kulingana. Kukhethwa umthengi abavamile kuthonywa izici eziningi .. Intengo kwemithi ( "Linex" kancane ezibizayo "bifiform"), iseluleko sikadokotela, okuthandwa nabangane nabantu obajwayele, isipiliyoni ukwelashwa langaphambilini, njll Labo abaye basisebenzisa ngayo ngezikhathi ezahlukahlukene kokubili izidakamizwa, wazi ukuthi amaphilisi "Linex" ngempumelelo ngaphezulu ekulweni dysbiosis nemiphumela yaso. Nokho, bavame counterfeited, ngakho lapho uthenga imithi kunobungozi ukuze uthole esikhundleni nokuphathelene kusho wokulinganisa abavamile powder. Yiqiniso, ngeke ukulimaza impilo, kodwa futhi okuhle ngeke nilingenise.
Probiotic "Bifiform" noma "Linex" - okuyinto engcono? Ngokusho odokotela
Okwamanje, abaningi ngokuvamile ephephandabeni kuthelevishini wethule ulwazi akukho isifo esinjengo dysbacteriosis. Kukholakala ukuthi umzimba ngokwawo Ungakwazi ukubuyisela ukusebenza evamile ipheshana wokugaya ukudla, futhi akudingeki ukuba uthathe noma imithi. Ngokwezinga elithile lokhu kuyiqiniso, kodwa ngokushesha kangakanani uzoqala ukusebenza emathunjini? Yingakho kufanele umsize probiotics, okuyinto kuzodala microflora entsha enempilo. Kodwa ezinye izidakamizwa kuyabekwa, "Linex" noma "Bifiform" uxazulula udokotela, futhi lokhu kunalokho ezingafanele. Ngokuvamile, udokotela angamane nje kusho ukuthi kudingeka baphuze inkambo probiotics, futhi ubiza ongakhetha eziningana ongakhetha kuzo. Ngoba akukho mehluko oyisisekelo phakathi izidakamizwa lapho, futhi umehluko lo mshini wezenzo noma ukwakheka akakwazi ngokuthi zonke udokotela. Ngakho-ke, isizathu kuphela zokwenqabela leso yimuphi izidakamizwa probiotics iqembu kungaba ukungabekezelelani ngabanye bathole ezinye zezici zalo.
Impikiswano mayelana nokusebenza kwama-probiotics "Linex" noma "Bifiform" - indlela yokucabanga evamile abstract is hhayi ukuqinisekisile yinoma yimuphi ucwaningo ezimele. Ukutadisha izakhiwo zomuthi, olusekelwa ngumkhiqizi, ke njengenkulumo njengoba kuhlola Ngeke neze umgomo. Ngakho-ke, uma uthemba nodokotela wakho, cabanga izincomo zayo.
Ukuhunyushwa okushiwo nokuchazwa kuyo inkulumo ethi "Bismillyahi Rahmani Rahim"